Goobaha Khadka Tooska ah ee Bulgariya - Xeerarka Lacagta Kaadhadhka ee Khadka Tooska ah
Goobaha qadka tooska ah ee internetka ee martigeliya ciyaartooyda Bulgaria
Fiiri liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Bulgaria oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah oo khadka tooska ah ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta si ay ugu noolaadaan ciyaaraha khamaarka kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming iyo kuwo kale oo badan.
Bulgaria waxay soo jiidataa dalxiisayaasha kaliya maahan xeebaha bacaadka ah, laakiin sidoo kale leh baashaal ballaaran oo kala duwan. Farxadda weyn ee dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka ah, khamaarka Bulgaria waa sharci. Ogaysiis booqdayaasha kaydkeena internetka ee khamaarka in casinos-yada ugu waawayn wadanka ay ku yaalaan caasimada Sofia, iyo waliba meelaha caanka ah ee loo dalxiis tago. Awoodda sharciyeynta khamaarka ee loo oggol yahay waddanka waa Guddiga Khamaarka Gobolka, oo ay sameysay Wasaaradda Maaliyadda ee Bulgaria. Dukumiinti rasmi ah oo sharciyeeya khamaarka waddanka ayaa ah Sharciga cusub ee khamaarka ee Bulgaria, kaasoo dhaqan galay January 1, 2017.
Khamaarka khadka tooska ah ee Bulgaria waa sharci. Hawlwadeennada caalamiga ah waxay u baahan yihiin inay helaan rukhsad ay ku fuliyaan waxqabadyada khamaarka dhulka waddanka. Laga bilaabo Janaayo 2017, waxaa jira goobo badan oo khamaar internet-ka ah oo ku yaal Bulgaria - laga bilaabo casinos-ka khadka tooska ah illaa kuwa wax iibsada ee internetka ah. Calaamadaha ugu caansan waa Pokerstars, bet365, bwin iyo betfair.
Bulgaria waa dal soo jiita dalxiisayaasha iyagoo wata fasax qurux badan oo ku jira Badda Madow, meelaha lagu caweeyo ee barafka lagu ciyaaro iyo casaanyo dalxiis. Isku darka adeegga wanaagsan iyo qiimaha dimoqraadiga ah ayaa dalkan ka dhigaya meel ay si weyn ugu soo jeedaan dalxiisayaasha adduunka oo idil. Hawsha CasinoToplists waa inay ogaadaan sida wax u jiraan khamaarka iyo casinos online-ka ee Bulgaria xilligan.
Kasiinooyinka khadka tooska ah ee shirkadaha caalamiga ah waa inay haystaan ​​rukhsad Bulgaria. Inta soo hartay waa xanniban yihiin;
Haddii hawlwadeenka caalamiga ah uusan xanibnayn, waad ciyaari kartaa. Laakiin halista adiga kuu gaar ah (waa la xiri karaa);
Ma rabtaa inaad ku ciyaartid casino tooska ah? Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo tan - tilmaamaha tallaabo-tallaabo;
Shuruucda Bulgaria ee khamaarka - tixraac taariikhi ah
1979 Furitaanka khamaarka ugu horreeya ee hudheelka Sofia "Vitosha"
1999 "Sharciga Khazart" waa sharci nidaaminaya khamaarka dalka. Soosaarista rukhsadaha Komishanka Gobolka ee Khamaarka. Asal ahaan, maalgashadayaasha maxalliga ahi waxay xaq u leeyihiin inay furaan casino. Si loo helo rukhsad shirkadaha ajnebiga ah waxay u baahan yihiin inay iibsadaan hudheel ugu yaraan 4 *.
Marka loo eego qawaaniinta gobolka, hawl wadeenku waa inuu “jidh ahaan” ku sugnaadaa dhulka dalka, lahaadaa meel u gaar ah oo uu ku bixiyaa cashuurta danta dalka.
Haddii goobta ku taal dhulka Bulgaria aan la xannibin - markaa waa loo heli karaa ciyaarta.
Land "offline" casinos ee Bulgaria
Xaaladaha waajibka ah ee helitaanka casino ee Bulgaria: da'da laga bilaabo 18 sano, helitaanka dukumiintiyada aqoonsiga. Ma awoodi doontid inaad ciyaarto haddii aad khamri ku jirto ama maandooriyaha maandooriyaha, aad soo gashatay dharka isla markaana aad tahay shaqaale dowladeed ama aad xiriir la leedahay ganacsi khamaar (xitaa qaraabada milkiilayaasha casino iyo shaqaalaha looma oggolaan karo inay ciyaaraan).
Khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee 'Bulgaria' - Sidee loo bilaabaa ciyaarista khadka tooska ah ee internetka
Waxaan go'aansanay inaan abuurno tilmaam tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo bilaabo ku ciyaarista qamaarka internetka. Sida caadiga ah, dhammaan casinos-yada ajaanibta ah waxay adeegsadaan Ingiriis caalami ah, markaa ugu yaraan aqoonta ugu yar ee aad u baahan tahay.
Iska hubi haddii khadadkaasi uu sharci ahaan ka yahay dhulka Bulgaria. Haddii khamaarka aan laga xannibin dhulka Bulgaria cinwaanka IP, markaa waa la heli karaa si loogu ciyaaro. Mararka qaarkood casinos ma aqbalaan ciyaartoy ka socota Bulgaria, way fiicantahay in wax laga barto khamaaris gaar ah oo ku saabsan adeegga taageerada. Adeeg noocan oo kale ah wuxuu ku jiraa casino kasta oo qaawan oo internetka ah.
Joogitaanka liisanka caalamiga ah ee khamaarka (macluumaadka waxaa laga heli karaa bogga internetka ee khamaarka ee dadweynaha);
Software-ka khamaarka waxaa matalaya soosaarayaasha waaweyn ee ciyaaraha internetka (NetEnt, Playtech, Microgaming, iwm.).
Dooro habka lacag bixinta - casino wuxuu bixiyaa xulasho dhowr ikhtiyaar oo lacag bixin ah (VISA, PAYPAL, WebMoney, Skrill, Yandex ama kuwa kale) waxaadna xaq u leedahay inaad doorato waxa adiga kugu habboon. Intaas waxaa sii dheer, caddee sharciyada gelitaanka iyo ka noqoshada lacagaha (mararka qaarkood lacag-bixinno badan ayaa lagu bixiyaa qaybo iyo waqti cayiman). Ha iloobin ku-beddelka lacagaha iyo guddiga hawlwadeennada inay lacagaha kala baxaan.
Shuruudaha furitaanka xisaabta (casinos-ka qaarkood waxay u baahan yihiin caddeyn aqoonsi - sax ah).
Waa maxay nooca dammaanadaha amniga ee ay bixiso casino? Qarsoodi xogta SSL, barnaamijka ciyaarta mas'uulka ka ah, iwm.
Ma jeceshahay naqshadeynta casino? Wax walba caqli gal miyaa?
Ka dib markaad isbarato dhammaan qodobbada kor ku xusan, waxaad aadi kartaa ciyaarta. CasinoTopLists sidoo kale waxay kugula talinayaan inaad aqriso macluumaadka ku saabsan sharciyada cayaaraha, nidaamyada iyo istiraatiijiyadaha. Marka si dhaqso leh ayaad wax uga baran kartaa ciyaarta, bankroll-kaaguna si fiican ayuu u kantaroolayaa.
Dalku wuxuu ku yaal xeebta Badda Madow wuxuuna xuduud la leeyahay dalal ay ka mid yihiin Griiga, Turkiga, Seerbiya, Romania iyo Macedonia. Markii ugu horreysay ee ku saabsan Bulgaariya waxaa lagu xusay 354 sano. Tan iyo waqtigaas, taariikhda dalkan waxaa soo maray dhacdooyin badan: waxay ahayd qabsashadii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta dabayaaqadii qarnigii 14-aad, ka-qaybgalkii dagaalkii lala galay Serbia intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, iyo ka-qaybgalka Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee dhinaca Jarmalka. Bulgaria Casriga ah waxaa la aasaasay 1989 waxayna noqotay jamhuuriyad baarlamaani ah. Hadda dalku wuxuu u qaybsan yahay 28 gobol oo caasimaddiisu tahay magaalada Sofia.
Alexander Nevsky Cathedral . Cinwaanka: Aleksandar Nevski 1 1000. Waxaa la dhisay 1912 waxayna ku dhex muuqataa kaniisadaha kale iyo kaniisadaha kale weynaantiisa. Awood - 5,000 oo qof.
Matxafka Qaranka Qaranka . Cinwaanka: Waddada Vitoshko Lale Street 16, 1618. Halkaan waxaa laga soo ururiyey waxyaabo taariikhi ah oo laga soo qaatay waqtiyadii ugu qadiimsanaa ilaa iyo maalmaheenna.
Sawirka Sawirka Qaranka . Cinwaanka: пл. "Amiir Alexandre I" №1. Dadka jecel farshaxanka ayaa xiiseyn doona booqashada carwada 50,000 oo sawir gacmeedyo ay soo bandhigeen sayidyo caan ah oo ka socda adduunka. Sidoo kale halkan waa bandhigyo farshaxan casri ah iyo fasallo sayid.
Magaalada Zoo . Cinwaanka: Albaabka hore wuxuu ku yaal Simeonovsko Shosse boulevard. “Wadada laga soo galo galbeedka ee laga soo galo wadada Srebarna 1. Dhulka 250 hektar waxaad ku kulmi doontaa waxyaabo badan oo qalaad oo aan ahayn xayawaan iyo shimbiro aad u tiro badan.
St. Sophia Cathedral . Cinwaanka: Wadada Paris 2. Kani waa Katidral, oo la dhisay qarnigii 6aad, wuxuu u bixiyay magaca caasimada Bulgaria.
80-85% khamriga adduunka waxaa laga dhoofiyaa Bulgaria;
Doolsho aad u jeceshahay - banichka ama banitza (xaashida dubista oo leh waxyaalo kala duwan oo laga buuxiyo brynza ilaa isbinaajka) Jiiska jiiska maadaama aysan sidan jirin;
Kiselo mlyako - kefir qaran - ma laha analogues adduunka, maxaa yeelay waxaa lagu soo saaray iyada oo lagu daro nooc gaar ah oo bakteeriyo ah. Japan gudaheeda baahi weyn ayaa loo qabaa waxaana loo arkaa inay tahay "elixir cimri dherer";
Dadka Bulgaariyayaashu si gaar ah uma ilaaliyaan waqtiga oo goor dambe waa la ogolaan karaa. Intaas waxaa sii dheer, dadkan waxaa lagu gartaa tayo aan fiicnayn sida xaasidnimo. Deriska ayaa aad u jecel inay ka wada hadlaan;
Magaalooyinka loo dalxiis tago badanaa waxaa laga helaa liistada dadka maxalliga ah iyo kuwa ajaanibta ah. Dabcan, farqiga udhaxeeya qiimuhu waa mid la taaban karo;
"Haa" madax-ku-dhigga Ruushka micnaheedu waa "maya" Bulgaria, iyo lidkeed. Taxaddar!
Inta badan nasashadaydu waxay ahayd magaalo yar oo la yiraahdo Bansko. Marka lagu daro cabirka dhexdhexaadka ah, waxaa sidoo kale xusid mudan qiimaheeda dhexdhexaadka ah, dabeecadda quruxda badan iyo dareenka joogtada ah ee raaxo yar. Tirada dalxiisayaashu waxay gaarayaan qiimeyn cabsi leh; buufinka ayaa lagu buufinayaa waqti dheer oo hawo leh, wuxuuna si deg deg ah ku gaadhay xaalad ka horreysa sacab cod dheer, burbur iyo lama filaan ah. Dad badan oo dalxiisayaal ah oo ka kala yimid dalal kala duwan oo Yurub ah, oo ay weheliso caado qariibka ah ee dadka deegaanka - si ay sawirrada ehelka dhintay ugu laalaadaan albaabbada hore ee guryahooda. Si kastaba ha noqotee, dadka ka socda Bansko sidoo kale waxay leeyihiin naxariis iyo saaxiibtinimo taas, guud ahaan, isku wareegeysa jawiga photonecropolis. Intaa waxaa sii dheer, runtii waan ka helay sida mid ka mid ah cunnada maxalliga ah oo leh cunno qaran, ka dib markii aan cunay hilib weyn oo hilib ah, waxaa la i keenay koonto oo waxaan ku qodbay qashin qaas ah oo leh saameyn muuqata oo mindi weyn ah. In kastoo si isku mid ah wax looga qabto lacagta lama siinin.
Hadda ku saabsan casino. Magaalada Bansko waxay si run ah ugu xun yihiin. Calaamadaha dhalaalaya ee rajo leh ayaa qarsoon hoolalka caadiga ah ee qiiqu ka buuxo ee mishiinnada lagu dhejiyo. Intaas waxaa sii dheer, xitaa xulashada isla boosaska iyaga ku jira ayaa ka tagaya waxyaabo badan oo la doonayo. Waxaan xusuustaa laba meelood, midi wuxuu ku yaalay hudheelka Vihren, halka kan kalena lagu faano loo yaqaan Blitz. By habka, dhammaan xarumaha khamaarka ee Bansko wuxuu u muuqday midka ugu fiican, dadka kale waxaa ku kala soocay shaqaale wanaagsan iyo joogitaanka roulette elektaroonig ah. Maamulaha maxalliga ah wuxuu sifiican ugu hadli jiray luqada Ruushka. Wuxuu sheegay in Bulgaria ay ka jirto kaliya casino caadi ah Sofia iyo Varna.
Hagaag, wali ma aanan gaarin Varna, laakiin waxaan tagay Sofia. Markii hore, waxaan joogay Plovdiv. Arimaha muhiimka ah, shaqada iyo duruufaha kale. Laakiin waxaan nasiib u yeeshay inaan helo maalin bilaash ah. Waxay ku hartay oo keliya in la go’aansado sida loo tago caasimadda Bulgaria. Waan cabi lahaa, markaa waa la diiday in la qaato gaari kiro ah, safarka baska sidoo kale wuxuu u muuqday farxad shaki leh. Laakiin cunug reer Yukreeniyaan ah oo la yiraahdo Taras ayaa ii soo gurmaday. Wuxuu ku noolaa Bulgaria muddo 10 sano ah, si loo yiraahdo, wuxuu ku ganacsanayaa halkan. Taras wuxuu i baray Volodya, oo ka yimid Saratov kulul. Waddankan koonfureed, wiilku wuxuu helay guri labaad. Guud ahaan, wuxuu ogolaaday inuu igu qaato xoogaa lacag qosol ah. Intii aan jidka ku jiray, Volodya wuxuu qirtay inuusan waligiis tagin Sofia ama khamaaris, sidaa darteedna safarkan ayaa isaga u xiiso leh sida aniga oo kale.
Waxaan gaarnay caasimada Bulgaria, waqti yar ayaa jiray, laakiin waxaan doonayay inaan helo waqti aan kuqabto. Sababtoo ah macquul ahaanshaha, waxaan soo arkay dhowr goobo dalxiis oo muhiim ah, kuwaas oo aan si faahfaahsan uga sheegi doono qoraalada kale, fiidkiina waxaan aaday casino. Waxaan ku guuleystey inaan booqdo seddex meelood: Princesses, Viva iyo London.
Princess Casino waxay ku taalaa Rodina Hotel. Waa hay'ad hufan: jaangooyooyin caadi ah oo roulette, turub iyo blackjack - kaliya 9 miisas ah. Khamaarista waxaa lagu sameyn karaa dollar, euro iyo leva maxaliga ah. Chips-ka ayaa loo oggol yahay in si toos ah looga iibsado miiska. Amiiradu ma xumeyn, laakiin waqtiga ayaa sii yaraanayay, waxaanan doonayay inaan inbadan arko.
Safka labaad ee safarka wuxuu ahaa Viva casino. Dhexdeeda, dhammaan ganacsadeyaashu waa gabdho ku labisnaa dhar cagaaran oo qurux badan. Gaar ahaan qayb xusid mudan oo ka mid ah lebbiska ayaa ah kuwo si qoto dheer u jajabiya, taas oo, in kasta oo ay inyar ka mashquulinayaan ciyaarta, laakiin waxay bixiyaan raaxaysi qurux badan. Khamaarigan wuxuu ahaa dadka ugu badan, oo ku filan labadaba gudaha iyo shisheeyaha. Volodya iyo waxaan ku guuleysanay inaan ka helno meel miis jaban oo blackjack ah - inta soo hartay waxay ahaayeen kuwo mashquul ah Marka waa inaan ku ciyaaraa saamiyada carruurta. Agteenna waxaa fadhiyay nin, markii hore waxaan u qaatay nin ludoman Bulgaariya ah oo gubtay. Intii ay ciyaartu socotay, wuxuu ku dhaawaqay faallooyin qiiro leh afkiisa hooyo. Qeybta ugu weyn ee ereyadiisa ma aanan fahmin, ka dib markii Volodya uu sharaxay - ma ahayn nin ludoman ah, laakiin aabaha gabadha croupier ee dharka cagaaran oo leh qoorta. Badanaa wuxuu ka baryay gabadhiisa inay ku laabato jaamacadda, saameyn badana, wuxuu ugu yeeraa dhillo.
Waqtiga ay saacaduhu dhaaftay saqda dhexe kadib, aniga iyo Volodya waxaan horeyba ugu sii socon jirnay xarunta ku xigta. Kasiinada waxaa loo yaqaanay London, waxay nagu soo dhoweysay gacmo furan waxayna ka tagtay dareenka ugu wanaagsan. London gudaheeda waxaa ka jira turub naadi ah. Booqashooyinka si joogto ah ayaa halkan loogu qabtaa, waxaana lagu sii daayaa plasma-ka hoolka guud. Shaashadaha telefishanka ka sokow darbiga, oo waxay kaloo leedahay 13 miis, laba kalena waxay ku yaalliin aagga naadiga. Khamaarahan waxaa sidoo kale ku yaal hoolka VIP, laakiin dhammaantood laguma aqbalo halkaas. Marka la eego, shaqaalaha London way fiican yihiin, laakiin way kasii fiicnaanaysaa, kuma hadlaan luqadda Ruushka, laakiin waxay ku hadlayaan Ingiriis ama af kale oo qalaad. Aqoonta luuqaduhu ma sahlana oo keliya fahamka, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa heerka guud ee adeegga.
Sofia gudaheeda, waxaa ku yaal casinos kale, laakiin badankood waa hoolalka mashiinnada ciyaarta oo leh astaamo khiyaano dhalaalaya. Way cadahay in khamaarka Bulgaria uusan aheyn cunada ugu weyn, waxay aadayaan culeyska nasashada dhaqameed, qofna halkan uma imaado si gaar ah daneenayaasha maxalliga ah, Vegas maahan adiga. Oo waxaa jira gaabis ku ah warshadaha, dabcan, laakiin aragtidayda guud waxay ahayd mid wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxaan ku soo afjaray safarkii seddex casinos oo lagu daray, inkasta oo uusan weyneyn, laakiin kharashka wadada iyo madadaalada ayaa si buuxda loo bixiyay. Marka, haddii aad isku aragto Bulgaria oo aad rabto inaad ciyaarto - waxaad si ammaan ah u tagi kartaa qamaarka maxalliga ah, kaliya ha arag calaamadaha midabbada dhalaalaya.
3.0.1 Shuruucda Bulgaria ee khamaarka - tixraac taariikhi ah
3.0.3 Land "offline" casinos ee Bulgaria
3.1 Khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee 'Bulgaria' - Sidee loo bilaabaa ciyaarista khadka tooska ah ee internetka
uptown aces maalgalin